Aabo Gabadhiisa oo 14-Sano jir ah si arxan darraa ugu dilay degmo ka tirsan Koonfur Galbeed - Ceeldheer News: Somalia News Update
Degmada Buurhakaba ee gobolka Baay waxaa ka dhacay dil dad badan ka argaxeen ,kadib markii aabe gabadhiisa oo 14-sano jir aheyd si silac ah ugu dhax dilay gurigooda.
Gabadhan la dilay oo lagu magacaabayay Faa’isa Abuukar Ibraahim ayaa la sheegay in ay isku dhaceen eedo aabaheyd qabay, waxaana Eedada oo careesan gabadhan ku dacweysay ninkeeda oo ahaa aabaha gabadha kaa oo isna si naxariis daro ah u garaacay una xir xiray.
Hooyada Dhashay gabadhan oo lagu magacaabo Maariin Maxamed Cadaw ayaa Warbaahinta u sheegtay in gabadheeda in sil silad looga xiray gacmaha iyo lugaha sidoo kale afka loo galiyay jalbaabkeeda sidaasna sadex maalmood qol ugu xirneed iyada oon biyo iyo raashin la siin.
Gabadhan ayaana silaca ay marsiiyeen aabaheed iyo xaaska uu qabay ugu dambeyn u geeriyootay, waxaana falkan aad uga argagaxay dadka kunool Buurhakaba iyo dadkii kale ee maqlay falkan argagaxa lahaa.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaan wali ka hadlin dhacdadan argagaxa leh , waxa ayna dalbatay hooyada dhashay gabadha la dilay in cadaalada la marsiiyo aabaha gabadhiisa dilay iyo xaaska uu qabo oo sheegtay in iyadu dhibka ka dambeesay.